Izilo ezikhulu ezipheleleyo zentsimbi zikubeka ngaphambi kwe-5v5 imidlalo yabadlali abaninzi yeedinosaurs | I-Androidsis
Izilo ezikhulu ezipheleleyo zentsimbi ziza kubushushu bedabi royale ukuba ngumdlali wabadlali abaninzi kwi-intanethi esiya kuthi sijongane nabanye abadlali kwimephu emfutshane eyandisiweyo. Siza kulwela ezinye iziseko ukuze sizigcine kwaye sikwazi ukujongana nokubetha okuhle kubachasi bethu.
Isihloko se-3D esithi cUkuhlangabezana neziseko ezisisiseko zokuba ngumlo wokulwa ngexesha lokwenyani elingagcinwanga kakuhle, nangona inendlela ende ekufuneka ihanjisiwe ukuze ikwazi ukujongana neminye imidlalo kudidi lwayo. Ewe kunjalo, ukuba uyazithanda iidinosaurs, ungasele uqhele uluvo lokuba uya kwakha enye ene-arsenal elungileyo.
1 Iidinosaurs eziphaphazelayo, zixhuma ...
2 Sebenzisa izakhono ngexesha elifanelekileyo kwiiMonsters eziPheleleyo zeMetri
3 Dinosaurs kwiselula yakho
Iidinosaurs eziphaphazelayo, zixhuma ...
Sijongene ne 5v5 shooter apho kuya kufuneka ulawule ukwazi ukuba uyisusa njani idayinaso yakho ngokusebenzisa indlela yokulwa ngelixa itsiba, ibhabha okanye ithatha ukhuselo emva kodonga ukuze ikwazi ukunciphisa amandla edubulo lotshaba. Isihloko apho kufuneka siphucule iidinosaurs zethu ngelixa sivula abanye abaninzi ukuze bakwazi ukujongana namaqela angcono.
Izilo ezikhulu ezipheleleyo zentsimbi ngumdlalo we-3D apho ukufezekiswa kobuchwephesha kungalunganga kwaphela. Siza kudlala nxamnye nee-dinosaurs zesinyithi esomeleleyo kwihlabathi lasemva kokubhujiswa elisekwe kwimowudi yemidlalo eyahlukeneyo ukuze sibe neeyure kunye neeyure zokuzonwabisa. Ngapha koko, inyani yokuba sinokude sibhabhe kunye needinosaurs zethu zentsimbi inika ingongoma enkulu yokuba abadlali abathile baya kuthandana nayo.
Ewe amadabi awazukukhangeka ukuba abenomtsalane kwabo baneziphumo zokwenyani kunye nazo zonke izinto ezintle zomsi, amalangatye kunye nokunye, kodwa Ewe banexinzelelo ukuze xa abadlali ababini okanye abathathu besilandela siza kubona ukuba sikwazi ukujongana nabo ngaphandle kokuphulukana nobomi bethu endleleni.
Sebenzisa izakhono ngexesha elifanelekileyo kwiiMonsters eziPheleleyo zeMetri
Izilo ezikhulu ezipheleleyo zentsimbi ziyasivumela yazi izakhono ezahlukeneyo Iidinosaurs zethu. Izakhono ezinje ngeempumlo, ukutsiba, indawo ekumiwa kuyo endaweni okanye ukuzalwa ngokutsha, ngumzekelo ocacileyo wokuba kuya kufuneka sazi ukuba sizisebenzisa njani ngalo mzuzu uthile ukuze sisebenzise ithuba lomdlali wotshaba.
Kuyafana nangezixhobo esinokuzibeka ngasemva kwidayinaso yethu yentsimbi kunye noluhlu olusuka kwimipu ukuya kuthi ga kwi-blasters elandelayo. Kukwenzeka okufanayo kumadabi asemoyeni aya kuthi asivumele ukuba sihlasele isibhakabhaka sikwenze kucace ukuba siliqela eliphumelelayo ekungekho mntu unokuloyisa kwezi ngxoxo ze-Intanethi.
Ngeentlobo ngeentlobo zeedinosaurs, zombini oomatshini kunye neTyranousario, Nditsho nezendalo ezinje ngeSpinosaurus, kwaye ngaphandle kokuzilibala ezo zongezekileyo, njengeTriceraptor (isiqingatha sendoda, umatshini wesiqingatha), siya kuba nesandla kuthi ithuba lokukhetha idayinaso elingana nesimbo sethu sokulwa. Kwaye apha siya kuba neendidi ezahlukeneyo zokukhetha, ke sicebisa ukuba uzame zonke.
Dinosaurs kwiselula yakho
Izilo ezikhulu zeMetro ziphakamisa Amava omdlalo wokulwa wabadlali abaninzi kwi-Intanethi apho singafumani ntengiso kumdlalo wokuqala kwaye oku sele kuxatyisiwe, kuba kukho imidlalo ethile ethi ngenxa yale nyaniso ifumaneke kuwo wonke umhlaba. Ngokwazi kwethu, i-Full Metal Monsters ikwisigaba sophuhliso, nokuba awuyiboni kuloo nto "ingapapashwanga" kwivenkile yokudlala, ke iyahlaziywa ngophuculo oluqhubekayo.
Un umdlalo olungileyo ngobuchwephesha, kodwa oko kunika ngokwaneleyo ukuba ube nemidlalo ekhunjulwayo kwi-intanethi. Eli lelona nqaku lalo lithengisa kakhulu ukuze ubambeke kwiidinosaurs zalo kunye nemidlalo ekhawulezayo ekufuneka unike ingqalelo kuyo.
Izilo ezikhulu ezipheleleyo zentsimbi ziza simahla kwiVenkile yeGoogle Play ke ungonwabela imidlalo ekwi-Intanethi ngokungathi ubuphakathi kumboniso bhanyabhanya weSteven Spielberg Jurassic Park. Isihloko somgangatho esithemba ukuba siya kuphucula ngohlaziyo olukhulu lwamva, njengoko benesiseko esihle salo. Sishiya enye idayinaso, kodwa ngenye indlela.
Izilwanyana ezikhulu ezipheleleyo zentsimbi
Inesiseko esihle sokuphucula
Ukuphucula iidinosaurs zakho
Ukusilela ukubukeka kumlo
Umthuthukisi: Imidlalo ye-Azur Esebenzisana nayo
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Khwela idayinaso yakho kwiiMfazwe eziMagqabini zeMetri ezigcwele kwi-intanethi